Iseluleko kochwepheshe - Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ulapha: Ikhaya » Iseluleko kubachwepheshe
Kuleli khasi kungenzeka ukuthi ucele ukubonisana nochwepheshe we-TrainingCognitive maqondana necala lomtholampilo noma izivivinyo ezizokwamukelwa ekuhloleni. Sikucela ukuthi ugcwalise ifomu elinamathiselwe ngokukhetha uchwepheshe ofuna ukumcela iseluleko futhi ulindele kafushane isihloko sesicelo. Uzothintwa ngokutholakala kwethu njalo ngehora komhlangano nge-Skype noma nge-Zoom. Izindleko zokubonisana yi- € 50 / ihora. Inani eliphansi, elingaphansi kwehora elilodwa, lingu-50 €.
Uchwepheshe ongathintana naye *
UDkt Anemone - I-Neuropsychologist (ukuhlolwa kwe-neuropsychological ye-ASD esolwayo kanye / noma i-ADHD ekukhuleni nasebudaleni, imishanguzo yokwelashwa kwe-neuropsychological ye-ASD kanye / noma i-ADHD kanye / noma nokushoda kwengqondo ekuxakekeni)
UDkt. Donadio - Speech Therapist (ukuhlolwa nokwelashwa kwezifo nolimi)
UDkt. Enrica Marrocco - Isazi se-Neuropsychologist (ukwengamela ekuhlolweni nasekuhlelweni kokungenelela kokuqonda nokwengqondo kwezenhlalo ekugugeni okunempilo nokugula)
Incazelo emfushane yendaba yokubonisana *